Accueil > Gazetin'ny nosy > Tolo-dalàm-pifidianana: Soa fa lany teny Tsimbazaza
Tolo-dalàm-pifidianana: Soa fa lany teny Tsimbazaza
Tena nanehoan’ny solombava Hvm sy ny mpiara-dia aminy ny fahaiza-manaony omaly tontolo ny sehatry ny fanaovan-dalàna teto Madagasikara. Noho ny fampiasana volabe dia tampina tanteraka ny masom-panahin’ireo solombava marivo salosana 79 ka naneho ny fankatoavany andetrezana an’ireo tolo-dalàna fehizoro telo karazana momba ny fifidianana. Teo aloha ny tolo-dalàna fehizoro momba ny fifidianana ankapobeny na “projet de code electoral” fa teo koa ny tolo-dalàna fehizoro momba ny fifidianana filohampirenena fotsiny sy ny tolo-dalàna fehizoro momba ny fifidianaa solombavambahoaka fotsiny. Solombava 79 hatrany no nankato azy ireo.
Ny hany mba fanitsiana nentin’izy ireo dia ny tao amin’ny tolo-dalàna momba ny fifidianana solombavambahoaka momba ny fe-potoana hanatanterahana ny fampielezan-kevitra. Tena mibaribary fa tsy te hahalala afa-tsy nytombontsoany ry zalahy ireo. Hitan’ireo solombava mantsy fa kely loatra ny 15 andro tokony hanaovana fampielezan-kevitra ka nohalavainy ho 21 andro. Ankoatra an’io dia ny fandavan-dry zareo 79 ny tsy maintsy ahazoan’ny kandida hofidiana solombava sonian’olomboafidy 150.
Rariny aloha ny nanitsian’izy ireo an’ireo andininy ireo saingy mibaribary fa tsy te hahalala afa-tsy ny tombontsoany ry zareo.
Soa fa lany izany ireo tolo-dalàna ireo dia hibaribary eo amin’izay ny toetra mamoehitra ny HVm.
Ireny fankatoavana ny tolo-dalàna momba ny fifidianana teny Tsimbazaza ireny moa dia ny solombava naman’izy ireo ihany no nanamafy fa vola manodidina ny 50 ka hatramin’ny 300 tapitrisa isan’olona, arakaraka ny lanjan’ilay solombava, no vola tambin’ny fankatoavana an’ireo tolo-dalàna ireo. Tena mahamenatra. Ny solombava avy amin’ny Mapar sy ny Tim ary ny tsy miankina maro dia efa nandrafitra avy hatrany taratasy nalefa eny amin’ny Bianco fa samy nana porofo mpomba izany kolikoly avo lenta izany.
Mbola nasaina nankato an’ilay tolo-dalàna momba ny faritra ara-toekarena manokana (zone économique spéciale = ZEs) koa ireo solombava notakonam-bola ny masom-panahiny ireo omaly.
Soa koa fa lany izany. Anjaran’ny Antenimierandoholona amin’izay izany izao no manamasina an’ireo fankatoavan’ny teny Tsimbazaza an’ireo lalàna ireo. Ny eny moa dia tena fanamasinana satria saika Hvm ny 95%-n’ireo loholon’i Madagasikara mandrafitra an’io andrim-panjakana io. Ny eny kosa angamba tsy misy kolikoly avo lenta satria mandeha ho azy noho izy ireo azon’ny eny Mavoloha hisaorana raha vao mivilavila famindra.
Fa amin’ny ankapobeny dia heverin’ny mpandinika raharaham-piaraha-monina fa mahatsara zavatra ny amboletra sy andetrezana miharo kolikoly avo lenta toa izao ataon’ny HVm sy ny fitondrana Rajaonarimampianina izao satria manamora ny fahazoan’ny vahoaka ny zava-misy izao, ary mampiakatra avy hatrany ny hambom-pon’ny vahoaka hijoro hikatsaka ny tena fanarenana ifotony fa tsy izy intsony izao.